Team Zimbabwe UK to promote tourism – The business Connect Zimbabwe
Home > BUSINESS > Team Zimbabwe UK to promote tourism
Team Zimbabwe UK to promote tourism
TEAM Zimbabwe-UK chief executive officer Marshall Gore says that apart from playing football, they have also come to help promote the country’s tourism sector as well as reconnect with the Zimbabwe culture.
Speaking at a press conferencing/ addressing the media, Gore said that “beyond football, we are here to introduce these upcoming stars and allow them to understand the Zimbabwean culture and also to get to know the country,” he said.
Gore also added that they will be taking videos and pictures and that they will do a documentary which they will use to market Zimbabwe when they return back to the UK.
Team Zimbabwe UK is expected to play their first game on the 3rd of May against Chapungu in Gweru and also curtain raise for the game between Caps United and Harare City at the National Sports Stadium on the 5th of May.
Speaking at the same event, tour coordinator Farai Mutsunguma indicated that the other purpose of the tour is to allow the diaspora football players to participate in charity events including victims of cyclone Idai.
The touring team will also visit Hwedza on the 9th of May for the commissioning of a borehole and interaction with school kids in the rural schools so that the players can experience both the urban and rural setup of Zimbabwe.-
Dubai, Zimbabwe civil servants incentive travel deal
Zimnat donates to Melfort Old People’s Home